SLE4442 ကဒ် SLE4428 ကဒ် SLE5542 ကဒ် SLE5528 ကဒ် AT88SC102 ကဒ်၏ဆက်သွယ်ပါ IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား, SLE4442 SLE4428 SLE5542 SLE5528 AT88SC102 ကဒ်၏ဆက်သွယ်ပါ IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား
 » hardware » Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက်
SLE4442 ၏ဆက်သွယ်ပါ IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား, SLE4428, SLE5542, SLE5528, AT88SC102
Password ကိုစမ်းသပ်ခြင်း Copy ကူးစက် ဆက်သွယ်ရန် IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား, SLE4442 ကဒ် SLE4428 ကဒ် SLE5542 ကဒ် SLE5528 ကဒ် AT88SC102 ကဒ်၏ဆက်သွယ်ပါ IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား, SLE4442 SLE4428 SLE5542 SLE5528 AT88SC102 ကဒ်၏ဆက်သွယ်ပါ IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွား, IC Card ကို Chip မြန်ပွားကိုဆက်သွယ်ပါ, IC Card ကိုမြန် Clone ပွားကိုဆက်သွယ်ပါ, ဆက်သွယ်ရန် IC Card ကိုမြန် Copy ကူးပွား
စုံလင်သောမိတ္တူ SLE4442 ကဒ်, SLE4428 ကဒ်, SLE5542 ကဒ်, SLE5528 ကဒ်, AT88SC102 ကဒ်.
1. အလျင်အမြန်မိခင်ကဒ်ကဲ့သို့တူညီသောကဒ်ထဲသို့ IC ကဒ်ရေးရန်;
2. အလျင်အမြန် IC ကဒ်၏ password ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ;
3. အဆိုပါ IC ကဒ်ရဲ့ contents Verify;
4. ရှေ့အဘို့ 32 ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယူနစ် (00H ကို ~ 1FH) အဆိုပါ IC ကဒ်, သက်ဆိုင်ရာယူနစ်အတွက် writable ပြည်နယ်နေဆဲပါလျှင်, ကမိခင်ကဒ်၏အကြောင်းအရာနှင့် setting ကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးနိုင်ပါသည်.
5. အိမ်ရှေ့၏ဖြစ်ပျက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး bit နဲ့ 32 အဆိုပါ IC ကဒ်၏ယူနစ်ပြသနိုင်ပါသည်.
6. အကြောင်းအရာကူးယူတဲ့အခါမှာဒါဟာ IC ကဒ်အရေအတွက်အားတိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်နိုင်.
အဆိုပါ IC ကဒ်၏ password ကိုလူသိများအခါ SEL4442 ကဒ် / SEL4428 ကဒ်နှင့် AT88SC102 ကတ်အစာရှောင်ခြင်းမိတ္တူထုတ်ပေးရေးအတွက်အသုံးပြု.
ပုံမှန်စာဖတ်သူကိုအသုံးပြုသူရှေ့၏ဖြစ်ပျက်သည့်ဖျူးကိုသိမသွားပါစေနိုင်ပါတယ် 32 ယူနစ်, နှင့်ရှေ့ set ထိုးနှက်နိုင်ဘူး 32 ယူနစ်, ဤသည် SJM2436 Copy ကူးပွားဿုံဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်.
1. အဘယ်သူမျှမဆော့ဖျဝဲ, လွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်, နှင့်ကွန်ပျူတာစွန့်ခွာ
2. အဆိုပါကဒ်ကိုကူးယူမြန်နှုန်းအကြောင်း 1 ကဒ်နှုန်းဒုတိယ
3. ဒါဟာစကားဝှက်ကိုတားဆီးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ရှိပါတယ် miswriting, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ထိုသို့ဖြည့်စွက် IC ကဒ်ကူးယူခံရဖို့အကြောင်းအရာနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့်အခါ, ကဒ်မိတ္တူပယ်ချခဲ့သည်နှိုးဆော်သံ prompt ကိုထုတ်ပေးနေသည်.
ငါ SLE4442 သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဆက်သွယ်ရန် IC Card ကို Chip မြန် Copy ကူးပွားစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို, SLE4428, SLE5542, SLE5528, AT88SC102
prev: IC Card ကို Chip Device ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဆက်သွယ်ပါ
နောက်တစ်ခု: ID ကို + ဒေတာများမှာတော့သက်ဆိုင်ရာ MF1 ယင်း ID ကိုအတွင်းပိုင်း Code ကိုရန်အဆိုအရရေးသားခဲ့သည်ကြောင်း MF1 Composite ကဒ် Reader ကို
IC Card ကို Chip Device ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဆက်သွယ်ပါ
IC Card ကို Chip ပွား Device ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဆက်သွယ်ပါ
ဆက်သွယ်ရန် IC Card ကို Password ကို Decryption စမ်းသပ်စက်